October 20, 2021 - Celegroup
သမီးရွိေသာ ဖခင္ေတြ အရမ္းေကာင္းလုိ႔ အခ်ိန္ခဏေလးေပးျပီး ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္
October 20, 2021 Celegroup1975 0
သမီးရွိတဲ့ ဖခင္ေတြကို ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ အဲဒီေန႔ က သမီးက သမီးခ်စ္သူကိုအိမ္ေခၚလာၿပီး “အေဖ.. ဒါ သမီးခ်စ္သူ သမီး သူနဲ႔လက္ထပ္မယ္” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္ သမီး… သမီးကို သူဆင္းရဲမယူနဲ႔လို႔ အေဖ ဘာေၾကာင့္ေျပာရသလဲ အဲဒီေန႔က သမီးက သမီးခ်စ္သူကိုအိမ္ေခၚလာၿပီး “အေဖ.. ဒါ သမီးခ်စ္သူ သမီး သူနဲ႔လက္ထပ္မယ္” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ေနာက္ေတာ့ သမီးကို အဲဒီလူနဲ႔သေဘာမတူႏိုင္ဘူးလို႔ အေဖေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ သမီးေမးေတာ့ “ဆင္းရဲလို႔” […]
လပြည့်အချိန်အခါ ပြုဖွယ်ရာ မနက်ဖြန် လပြည့်နေ့သည် အစီအရင်တွေပေးဖို့ အချိန်အခါကောင်းအလွန်နည်းပါးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်ကောင်းသောအချိန်က မရှိသလောက်ရှားတာတွေ့ရပါတယ်။ လပြည့်နေ့အတွက်အစီအရင်တွေဒီလအတွက် အထွေအထူးမပြောပေးတော့ပါ။ ဒါကြောင့်ဘာတွေဆောင်ရွက်လို့ရမလဲ ? ဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ရမလဲ? ဆိုတာကိုပြောပေးပါ့မယ်။ လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်းကိစ္စများ အထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုထိဘုရားအနေကဇာမတင်ရသေးသူတွေ လပြည့်နေ့မှာ ရဟန်းသံဃာတွေပင့်ဖိတ်ပြီးဘုရားအနေကဇာတင်လို့ အထူးကောင်းပါတယ်။ ဘုရားအနေကဇာတင်တင်ပြီးသူတွေကလဲ အိမ်ကဘုရားဆင်းတုတော်ကို ရေသပ္ပယ်ခြင်း၊ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်း၊(လိုအပ်ပါက )ရွှေချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ဘုရားဆောင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းများ ဦးစွာပထမဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုသိုဆောင်ရွက်ပြီးပါက ဘုရားရှင်အားပန်းဆီမီးကပ်လှူပြီး ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ဥဒါန်းကျူးရင့်တော်မူသော အနေကဇာတိ […]
ဆီမီးပူဇော်ရခြင်း ကြောင့် ရရှိသည့် အကျိုးများ ..
ဆီမီး လှူရသောအကျိုး အလှူဒါနပြုကြရာ တွင် ဆီမီးလှူရသော အကျိုး ရှစ်ပါးဟူ၍ ရှိပါသည်။ ထိုအကျိုး ရှစ်ပါးတို့မှာ – ၁။ ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရခြင်း။ ၂။ အမိ၀မ်းတွင်းမှ ကန်းသောအမျိုး၌ မဖြစ်ခြင်း၊ ၃။ တွေဝေငိုက်မျဉ်းခြင်းမှကင်းခြင်း၊ ၄။ ကြည်လင်သော မျက်စိရှိခြင်း၊ ၅။ အမျိုးစည်းစိမ် အခြံအရံအားဖြင့် မြတ်ခြင်း၊ ၆။ အမှတ်မရှိသော အရပ်၌ရှိသောဝတ္ထုတို့ကို ထိုအရပ်မှ မြင်နိုင်ခြင်း၊ ၇။ တောက်ပသော အရောင်ရှိခြင်း၊ ၈။ […]